विचित्र संसार Archives • Page5of6• Nepal's Trusted Digital Newspaperविचित्र संसार Archives • Page5of6• Nepal's Trusted Digital Newspaper
सल्यान, २ मङ्सिर । सल्यानमा एकजना जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर शिक्षक पेशामा संलग्न हुनुभएको छ । सिद्धकुमाख गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष दिनेश कुमार बुढामगर वडाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर प्राथमिक तहको शिक्षक हुनुभएको हो । विसं २०७४ को स्थानीयतहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित बुढामगरले शिक्षक सेवा आयोगले लिएको प्राथमिक तहको खुलाकोटाअन्तर्गत मुस्ताङबाट नाम निकाल्नु भएको हो । तत्कालीन नेकपा […]
१ मङ्सिर । हलिउड चलचित्र ‘जोकर’ले बम्पर कमाई गरेको छ । यो चलचित्रले विश्व बक्स अफिसमा १ विलियन डलर कमाई गरेको हो । साथै, १ विलियन डलर कमाउने यो छैटौ चलचित्र समेत बनेको छ । यो चलचित्रले घरेलु बजारमा ३४० मिलियन डलर र ओभरसिजमा ८२० मिलियन डलर कमाई गरिसकेको छ । यो चलचित्रको हालै मात्र भेनिस […]
अमेरिकाको लुइजियानामा एक जोडीले फोहरको डंगुरमा लटरी टिकट भेटेपछि करोडौं रुपैयाँ जितेको छ । लटरीमा उनीहरूले २१ करोड रुपैयाँ जिते । तर करकट्टी गरेर उनीहरूले १५ करोड रुपैयाँ मात्र पाउनेछन् । ह्यारोल्ड र टिना नाम गरेको यो जोडीले घर सफा गर्दा टिकट भेटेका थिए । लाइभमिन्ट नामक वेबसाइटको एक रिपोर्टअनुसार, यो टिकट ६ जुनको लटरीको […]
उपन्यासको बारेमा हामीले धेरै सुनेका छौँ । कतिपयको उपन्यास निरन्तर पढ्ने बानी रहेको छ । कसैले समय बिताउन उपन्यास पढ्ने गर्दछन् । तर उपन्यासको इतिहासको बारेमा धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ । विश्वको उपन्यास कुन होला ? भन्ने जिज्ञासा पनि हुन सक्छ । विश्वको पहिलो उपन्यासको पाण्डुलिपी भेटिएको छ । हराएको उक्त उपन्यासको पाण्डुलिपीको एक पाना […]
घरमा कुकुर पाल्ने धेरैको शौख हुन्छ । कुकुर पाल्ने मानिसहरु बिहान साँझ कुकुरलाई लिएर डुलेको देखेकै हुन्छौं हामीले । जागिर तथा व्यवसायको व्यस्तताका कारण अहिले सहरका धेरै मानिसलाई कुकुर घुमाउने फुर्सद हुँदैन । तर अब अष्ट्रेलियामा चाहिँ घरमा पालेको कुकुरलाई दैनिक रुपमा नडुलाएमा चर्को जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । अस्ट्रेलियाको क्यानबेरामा घरपालुवा कुकुरको स्याहार सम्बन्धमा […]
युरोपेली मुलुक इटालीमा गएर बस्ने कुरा हामी धेरैका लागि सपना जस्तै होला । तर यदि यो खबर पढ्नु भयोभने अवश्य पनि रोमाञ्चित हुनुहुनेछ। किनकी इटालीको सिसिलीको एक नगर परिषदले विदेशीहरुलाई त्यहाँ घरजम गर्न सघाउ पर्‍याउने निकै गज्जबको कार्यक्रम अघि सारेको छ । उक्त अफर अनुसार त्यहाँ केवल १ युरो अर्थात् झण्डै १ सय २५ रुपैयाँ […]
२०६६ सालमा नेपालमा सगरमाथाको आधार सिविरमा मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको थियो । खासमा जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा पारेको असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि सगरमाथामा क्याबिनेट बैठक बसेको थियो । त्यहीँ बेला माल्दिभ्समा चाहीँ समुद्रको पानी मुनि क्याबिनेट बैठक बसेको थियो । जलवायु परिवर्तनका बारेमा ध्यानाकर्षणका लगि विश्वमा अनेक खाले अभियान तथा प्रदर्शनहरु हुने गरेका छन् […]
पति पत्नीबीच झैझगडा हुँदा, मन नमिल्दा तथा पतिले राम्रोसँग पालन पोषण नगर्दा पति पत्नीबीच डिभोर्स हुने गरेको त थाहा भएकै कुरा हो । तर यो दुनियामा केही महिला यस्ता पनि हुँदा रहेछन् जसले लोग्नेले बढि माया गर्दा पनि डिभोर्स माग्दा रहेछन् । पत्यारै नलाग्ने यो घटना युएइको हो । ती महिलाले आफ्नो लोग्नेसँग डिभोर्स माग्दा […]
आम रुपमा मानिसहरुलाई युरोपको कुनैबेलाको मुलुक (हाल टुक्रिसकेको) चेकोस्लोभाकिया (Czechoslovakia) जस्ता अंग्रेजी शव्द उच्चारणसमेत गाह्रो हुन्छ । तर जब कुनै एउटा अंग्रेजी शव्द उच्चारण गर्नका लागि साढे ३ घण्टा लाग्यो भने के होला ? हो, यो दुनियाँमा एउटा यस्तो अंग्रेजी शब्द छ जसलाई पढेर सिध्याउन साढे ३ घण्टा लागछ। एउटा मात्र शब्द पढ्नका लागि साढे […]
१२ अंकलाई धेरैले अशुभ मान्दछन् । कसैलाई दशा लाग्दा वा आपत पर्दा मेरो त बाह्र बज्यो भन्छन् धेरै मान्छेहरु । बाह्र बजेको समय पनि धेरैले अशुभ काल ठान्छन् र कतै यात्रा गर्दा बाह्र बजेको समय छल्ने गर्दछन् । तर जति छले पनि एक दिन अर्थात् २४ घण्टामा २ पटक त बाह्र बजेरै छाड्छ घडीमा ।घडीमा […]